ब्लू ह्वेल : किशोर किशोरीलाई आत्महत्या गर्न उक्साउने खेल - Himalayan Kangaroo
ब्लू ह्वेल : किशोर किशोरीलाई आत्महत्या गर्न उक्साउने खेल
Posted by Himalayan Kangaroo | ८ चैत्र २०७३, मंगलवार ११:३४ |
एजेन्सी । रसियामा एकाएक किशोर–किशोरीहरुले आत्महत्या गर्न लागे । दुई स्कूले किशोरीहरु सप्ताहान्तमा एक बिल्डिङबाट हाम फालेर मृत्युवरण गरे । १५ वर्षे युलिआ कोन्स्टान्टीनोभा र १६ वर्षे भेरोनिका भोल्कोभाले औद्योगिक क्षेत्र उस्ट–लिम्सको अपार्टमेन्टबाट हाम फालेर आत्महत्या गरेका हुन् । त्यसपछि एकाटेरिना नामक अर्की १५ वर्षीया स्कूले किशोरी पनि बिल्डिङबाट हाम फालिन्, उनको अवस्था अहिले गम्भीर छ । अर्का १४ वर्षीया किशोरीले आफैंले आफैंलाई रेलमुनि होमिन् र मृत्युलाई रोजिन् ।
यी सबै घटनाहरुलाई अनुसन्धानकर्ताहरुले विवादास्पद वेव ‘सुसाइड–गेम’ सँग जोडिएको आशंका गर्छन् । ती कथित सुसाइड गेमकै कारण किशोर किशोरीहरुले आत्महत्या गर्ने गरेको अनुसन्धानकर्ताहरुको भनाई छ ।
१५ वर्षीया युलिआ कोन्स्टान्टीनोभाले आत्महत्या गर्नुअघि आफ्नो सोसल पेजमा लेखेको नोटमा ‘इण्ड’ अर्थात अन्त्य लेख्दै ठूलो नीलो ह्वेलसँगको आफ्नो तस्बीर पोष्ट गरेकी थिइन् । नीलो ह्वेललाई विवादास्पद तर चर्चित ‘सोसल मिडिया मूभमेन्ट’को संकेतको रुपमा लिइन्छ, जसले बालबालिका तथा किशोर किशोरीलाई आफ्नो ज्यान दिन प्रोत्साहन गर्छ ।
युलिआकी साथी भेरोनिकाले लेखिन् – ‘चेतना हराएको छ, अन्त्य’ भेरोनिकाले लगातार गम्भीर र चोटग्रस्त पोष्ट लेख्ने गर्थिन्, कहिलेकाँही त अनौठो पनि । जस्तो –‘के तिमी बिस्तारै आफूले आफैंलाई काम नलाग्ने बेकम्मा सोच्छौ?’ ‘के म भूत हूँ ?’ यस्तै । यी सबै घटनाहरुका आधारमा प्रहरीले उनीहरुको आत्महत्या र ब्लू ह्वेलको सम्बन्ध के छ भन्नेबारे अध्ययन गरिरहेको छ । मरेका किशोरकिशोरीहरुको पारिवारिक पृष्ठभूमि राम्रो भएको बताईएको छ ।
किशोरकिशोरीले गेम जोइन गरेपछि उनीहरुलाई खेल पछाडिबाट प्रयोग गरिन्थ्यो । भूताहा र डरलाग्दो चलचित्र हेर्न लगाएर उनीहरुलाई ५० दिनसम्म हरेक रात आफैंले आफैंलाई चोट पु¥याउन अह्राइन्थ्यो । र, ५० औँ रात उनीहरुलाई मर्न उक्साइन्थ्यो । मर्नका लागि खेल पछाडिबाट नै निर्देशन आउँथ्यो ।
उनीहरुले केटीहरुलाई तिमी नराम्री छ्यौ,तिमी मोटी छ्यौ भनेर विश्वस्त पार्थे भने केटाहरुलाई तिमी काम नलाग्ने बेकम्मा छौ, संसारमा तिम्रो केही काम छैन भनिन्थ्यो । उनीहरुले हरेक रातको निर्देशन र लघुताभाषको चरममा ५० औँ दिनमा आत्महत्या गर्ने गरेको खुलेको छ । कसै कसैलाई त मरेपछि अर्को संसार छ, त्यहाँ तिमीलाई स्वीकार गरिनेछ, त्यहाँ खुशीयाली हुन्छ भनेर पनि भनिन्थ्यो ।
आरएफएलका एक संवाददाताले एक १५ वर्षे किशोरिको फर्जी प्रोफाइल बनाए । त्यसपछि ब्लू ह्वेल गेम खेल्न इच्छुक रहेको बताउँदैं अनलाइन कुराकानी शुरु गरे ।
उनीहरुको कुराकानीको अंश यसप्रकार छ :
‘म खेल खेल्न चाहन्छु ।’
‘तिमी पक्का खेल्न चाहन्छ्यौ ? खेलेमा पछाडी फर्किन पाइँदैन । ’
‘खेल्न चाहन्छु । तर पछाडी फर्किन पाइँदैन भन्नाले ? ’
‘तिमीले एकपटक खेल्न शुरु गरेपछि छोड्न पाइँदैन । ’
‘म तयार छु । ’
त्यसपछि खेलपछाडीको मान्छेले खेलको नियम बताउन थाल्छ र भन्छ, तिमीले अह्राएका सबै टास्क पुरा गर्नुपर्छ । तर तिमीले यो गेमको बारेमा कसैलाई बताउन पाउनेछैनौ । तिमीले टास्क पुरा गरेपछि फोटो पठाउनुपर्छ । खेलको अन्त्यमा तिमी मर्नेछौं ।
‘यदी म पछाडी हट्न चाहें भनें ? ’
‘म सँग तिम्रो सबै विवरण छ । तिमीलाई छोड्नेछैन ।’ र यसरी किशोरकिशोरी खेलमा फस्छन् ।
किशोरकिशोरीहरु यस्ता ज्यान दिने खेलप्रति आकृष्ट बनेको भन्दै रसियाली अधिकारवादीहरुले राजनीतिज्ञ तथा सरोकारवालालाई ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । २०११ को युनिसेफको रिपोर्टले रसियालाई तेश्रो उच्च आत्महत्या दर भएको राष्ट्र बताएको थियो । सन् २०१५ मा कम्तीमा २४ हजार ९ सय ८२ जनाले आत्महत्या गरेका थिए ।
Previousसुनिल ग्रोभरले द कपिल शर्मा शो छोड्ने
Nextआइजिपीमा जयबहादुर चन्दको नियुक्ति बदर
मान्छेको मासु खाने धामी !
७ भाद्र २०७४, बुधबार ००:३०
कसरी बच्ने फेसबुकबाट ? अपनाउनुहोस् यी नियम
९ बैशाख २०७५, आईतवार ०२:५५